Ukurhweba ngeScalping ngoJanuwari 2022 Fumana oyena Mrhwebi oBalaseleyo | Funda ukuRhweba
Yintoni ukuThengisa ngeScalping: OBalaseleyo kwiBroker yeXabiso leScalping 2021
Ukuze uphumelele kurhwebo lwe-intanethi kwi-intanethi ekuhambeni kwexesha, kuyakufuneka ube nesicwangciso esifanelekileyo osaziyo kakuhle. Akukho maqhinga mabini ayafanayo- ke yintoni esebenzela umrhwebi omnye isenokungasebenzi kuwe. Xa kuthethwa oko, scalping sesinye sezona zicwangciso zisetyenziswa ngokubanzi kwindawo yokurhweba kwi-Intanethi.
Ngamafutshane, ukurhweba ngesikali yinkqubo yokujolisa rhoqo, ekuzuzeni okuncinci kwimini yonke. Umrhwebi uya kufuna ukuvula kunye nokuvala urhwebo ngomngcipheko omncinci, ngombono wokufumana inzuzo ngokuhamba kwexabiso elincinci. Kananjalo, umrhwebi uya kuthi asebenzise iitshathi zemizuzu eyi-1, njengoko kufuneka babe nembono yeemarike ngexesha lokwenyani le-scalp ngempumelelo.
Ukuba unomdla wokufumanisa ukuba esi sicwangciso-nkqubo esithile sokurhweba sikulungele na-qiniseka ukuba usifunda isikhokelo sethu Yintoni ukurhweba ngeScalping? Ayisiyi kukunika kuphela i-ins kunye nokuphuma kwento eyenziwa yi-scalping kwaye isebenza njani, kodwa siza kuxoxa nabathengisi abaphambili be-forex yokusebenzisa isicwangciso.
Qaphela: Ukurhweba nge-Scalping- okanye nasiphi na isicwangciso sokurhweba malunga naloo nto, ayisiyonto onokuthi uyiqonde ngokulula ngobusuku. Ngokuchasene noko, kuthatha iinyanga ezininzi ukwenza isicwangciso ngempumelelo.
Yintoni ukurhweba ngeScalping?
Ngeyona ndlela isisiseko, ukucheba sisicwangciso-qhinga sokurhweba esijolise kwinzuzo encinci, rhoqo ngalo lonke usuku. Kananjalo, umrhwebi kunqabile ukuba agcine urhwebo luvulekile ngaphezulu kwemizuzu embalwa. Oku kwahluke mpela kumrhwebi ojija ngokwesiko, onokubona abathengisi bebambelele kwizikhundla kwinani leentsuku okanye iiveki.
Nangona urhwebo lwe-scalping lunokusetyenziswa nakweyiphi na iklasi yeasethi, ixhaphake kakhulu kwisithuba se-forex. Kungenxa yokuba izibini zemali - ngakumbi iijors, zihamba ngesiseko esincinci ngokujikeleza iwotshi. Ngaphaya koko, ezona zibini ziphambili zemali zinamanzi kakhulu, zibenza bagqibelele kwisicwangciso sokurhweba.
Ngokwezinto ezisisiseko, iscalping inokuba yindawo yokulwa kakhulu, hayi ubuncinci kuba umtyali mali kufuneka anikele nge-100% lexesha labo kunye namandla abo kurhwebo olunokubakho. Kungenxa yokuba umrhwebi kufuneka akulungele ukuhlawula ithuba elithile kwaye abone urhwebo ngesandla.
Ngokutsho, Ukutshiza kusoloko kujongwa njengomngcipheko ophantsi Isicwangciso-qhinga, njengoko abarhwebi beza kufaka ii-odolo zokulahleka kokugcina ukugcina ilahleko ezinokubakho ubuncinci. Ngapha koko, oku kubalulekile. njengelahleko enkulu inokucima inqwaba yeentengiso eziphumeleleyo ezenziwe ngumtyali mali kwangoko ngemini.
Zithini iingenelo kunye neengozi zeScalping?
Isicwangciso sobungozi obuncinci xa ilahleko enengqondo yokumisa ifakiwe
Amandla okwenza uzuzo rhoqo
Iyahambelana nezibini eziphambili ze-forex ezixhamla kwimali ephezulu
Eyona ndlela isebenzayo xa umrhwebi enobungcali kwisibini esithile semali
Ithatha ixesha lokuqonda isicwangciso
Ukuzuza kuncinci kakhulu
Usebenza Njani Ukurhweba ngeScalping?
Ukuba awuzange wenze urhwebo lwe-scalping ngaphambili, kungcono kakhulu ukuba sikunike imizekelo embalwa yokucoca inkungu.
1 Umzekelo XNUMX: Ukucheba i-GBP / i-USD
Masithi ujonge ukurhweba nge-GBP / USD ngesicwangciso sakho sokukroba. Ibhalansi yakho yokuqala yi- $ 1,000, kwaye uthatha isigqibo sokuyeka ukusebenzisa amandla.
I-GBP / USD okwangoku ixabiso kwi-1.3104
Emva kokufunda iitshathi, ucinga ukuba i-GBP inokuthi inyuke kwimizuzu embalwa ezayo
Kananjalo, ubeka i-oda yokuthenga eyi- £ 1,000
Ubeka i-oda yokuthatha inzuzo kwi-1.3169, ebiza ukwanda kwe-65 iipipi okanye i0.5%
Ubeka i-stop-loss order ukuze unciphise ilahleko yakho. Ku-1.3077, oku kuya kuba yilahleko yee-pips ezingama-27 okanye i-0.2%
I-GBP / i-USD ibetha i-1.3169, ke isikhundla sakho sokukroba sizivale ngokuzenzekelayo kwinzuzo ye-0.5% okanye i- £ 5.
Njengoko ubona kulo mzekelo ungasentla, iscalping sichaphazeleka kuphela kwiinzuzo ezincinci. Ngokwenyani, inye kuphela kwezi zinto zimbini zinokwenzeka kumzekelo onikiweyo. Ukuba urhwebo beluphumelele, umtyali mali ebeya kwenza i-0.5% yenzuzo, efikelela kwi- £ 5.
Nangona oku kuvakala njengesixa esincinci senzuzo ekujoliseni kuso, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba umrhwebi uza kujonga ukuphinda lo mzekelo ungasentla, okanye amaxesha angamakhulu ngalo lonke usuku. Ngenye indlela, ukuba urhwebo aluphumelelanga, umtyali mali ebeya kunciphisa ilahleko yabo kwi-0.2% okanye kwi-2 ye- £.
Makhe sijonge umzekelo wesibini ukuqinisekisa ukuba uyaqonda ukuba lusebenza njani urhwebo lwe-scalping.
2 Umzekelo XNUMX: Ukucheba i-EUR / USD kunye noNcedo
Nangona urhwebo lwe-scalping luxhalabile kukuhamba kwexabiso elincinci, ixabiso kufuneka lijongwe ngokweepips okanye ngeepesenti- hayi ngeniso yemali ngentetho nganye. Kananjalo, kunokwenzeka ukuba abathengisi basebenzise amandla okukhangela iintshukumo ezincinci zamaxabiso.
Oku ngokufanelekileyo kuvumela umrhwebi ukuba anyuse ubungakanani besikhundla sabo sokukhwela, ngaphandle kokufuna ukufaka imali enkulu. Kulo mzekelo, siza kujonga kwiziphumo zorhwebo olushushu kwi-EUR / USD xa usebenzisa isiseko se-10: 1 kumrhwebi.
I-EUR / USD okwangoku ixabiso kwi-1.1389
Umrhwebi othengisayo ucinga ukuba i-EUR iyakwenyuka ngexabiso xa ithelekiswa ne-USD kwimizuzu embalwa ezayo, ke ngoko bafaka i-oda yokuthenga
Umrhwebi uhlala efuna ukwenza i-0.3% yenzuzo kubarhwebi babo, ke umyalelo wokuthatha inzuzo we-1.1423 uyenziwa
Ukunciphisa ilahleko ukuya kwi-0.1%, i-odolo yokumisa ilahleko eyi-1.1377 nayo ibekiwe
Umrhwebi uphinde asebenzise umyinge we-10: 1, ethatha isibonda esipheleleyo ukusuka kwi- £ 1,000 ukuya kwi- £ 10,000
Urhwebo lwe-scalping luyimpumelelo, njengoko i-EUR / USD ibetha ixabiso ekujoliswe kulo le-1.1423 kwimizuzu embalwa kamva
Ngokomzekelo ongentla, i-0.3% yenzuzo kwixabiso le- $ 1,000 ukuya kwi- £ 3. Nangona kunjalo, njengoko umrhwebi esebenzisa umyinge kwi-10: 1 kwisikhundla, iinzuzo zandiswa zaba yi- $ 30. Kwiphepha le-flip, ukuba urhwebo luvaliwe ngelahleko, oku bekuya kuthatha ilahleko iye kwi- $ 10. Kananjalo, urhwebo ngalunye olwenziwa ngumrhwebi luya kuba nesiphumo senzuzo ye- $ 30, okanye ilahleko ye- $ 10. Oku kuthetha ukuba umrhwebi kufuneka ahlawule urhwebo olunempumelelo kwezi zintathu ukuze aphule.
Izibonelelo zoRhwebo lweScalping
Ukuba usifundile isikhokelo sethu ukuza kuthi ga ngoku, emva koko uya kwazi ukuba urhwebo lwe-scalping lunengqondo eyahlukileyo kuleyo Ukuguqula ukurhweba. Ngapha koko, iscalping silawulwa ngakumbi kwaye sisebenza ngokwenkqubo, hayi ubuncinci kuba inye kuphela kwiziphumo ezibini eziya kuthi zivele. Ngokuchasene noko, ukurhweba ngokurhweba kuhlala kuthatha "masibone ukuba iimarike zisabela njani" kwindlela.
Nazi ezinye zezona zibonelelo zibalulekileyo zokurhweba nge-scalping.
✔️ Ukuboniswa okuncinci kuMngcipheko
Esinye sezibonelelo ezixhaphakileyo zokuqesha isicwangciso sokurhweba kukuba uhlala unesicwangciso sokunciphisa umngcipheko endaweni. Oku kuza ngohlobo lwe-stop-loss order, oko kuthetha ukuba awusoze ulahlekelwe ngaphezulu kwexabiso lokuphuma.
Qaphela: I-odolo zokumisa ilahleko azikaze zibe yi-100% yobungqina obuyisidenge-ngakumbi kukuthengisa kwiimeko ezingazinzanga. Unokhetho lokumisela ilahleko eqinisekisiweyo yokumisa, nangona kunjalo, umrhumo owongezelelweyo oza noku unokwenza urhwebo olungenamsebenzi lube nengeniso.
Ukuba unomnqweno oqinileyo kwiimarike zezemali, ke ukuthengiswa kwe-scalping kulungile. Kungenxa yokuba uya kucelwa ukuba ubeke uninzi - ukuba akunjalo amakhulu Yorhwebo ngosuku.
Ungalibali, uyakube ujonge ukwenza iipips ezimbalwa kwinzuzo kurhwebo ngalunye, ke kuya kufuneka uphindaphinde kwinkqubo yonke yosuku ukwenza inzuzo ye-scalping. Kananjalo, urhwebo lwe-scalping lulungele ngakumbi abo banqwenela ukurhweba ngokusisigxina.
Inzuzo xa iMarike idibanisa
Xa i-asethi ethile idityaniswa-oku kuthetha ukuba ithengisela ngaphakathi kuluhlu oluthile kangangeeyure okanye iintsuku, phambi kokuba iimarike zigqibe ukuba yeyiphi na i-asethi elandelayo.
Umzekelo, ixesha lokudityaniswa kwi-GBP / i-USD inokubona urhwebo ngambini yemali kuluhlu oluqinileyo lwe-1.3001 kunye ne-1.3050. Oku kuzisa iimeko ezifanelekileyo kakhulu kurhwebo lwentloko.
Inani elikhulu lamathuba okuthengisa
Ukurhweba nge-Scalping kunokusetyenziswa nakweyiphi na iklasi yeeasethi. Oku kunjalo ngakumbi xa kuthengiswa izibini eziphambili ze-forex, njengoko iimarike zisebenza nge-24/7. Ngaphaya koko, ezona zibini ziphambili ziyaxhamla kwiimfumba zokungabinamali, kwaye amanqanaba okunyanzeleka ahlala esezantsi-esenza ukuba igqibelele kwiscalping.
✔️ Ziphephe izisongelo zokubawa
Ukubawa kuhlala kungumahluko phakathi komrhwebi owenza iingeniso ezingaguquguqukiyo, kunye nomrhwebi kutshisa I-bankroll yabo ngezikhundla ezingenangqondo. Ngale nto ithethwayo, iscalping sichaphazeleka kuphela ekwenzeni i-ultra-encinci- nangona kunjalo, ukuzuza rhoqo ngalo lonke usuku. Oku kuqinisekisa ukuba umrhwebi uyayeka ukwenza urhwebo olungenangqondo, njengesicwangciso esisebenzayo se-scalping sokusoloko sinee-odolo ezimiselweyo zokulahleka kunye nokuthathwa kwenzuzo.
Iingcebiso zokurhweba ngeScalping
Kukho inani lokuqwalaselwa ekufuneka ulwenzile ngaphambi kokuba uqale umsebenzi wakho wokurhweba. Ngokulandela iingcebiso ezichazwe apha ngezantsi, umi elona thuba lihle lokukhusela i-bankroll yakho kukudinwa.
🥇 Icebiso 1: Yonwaba ngeTshathi eMizuzu-1
Abo babandakanyeka kurhwebo lokuguqa ngokwesiko abayi kuba nomdla kwiitshathi zemizuzu eli-1. Kungenxa yokuba abathengisi be-swing bajonge umfanekiso wexesha elide, ke itshathi yemizuzu eyi-1 ayinamsebenzi kule nto.
Nangona kunjalo, itshathi yemizuzu eyi-1 yeyona nto ifunekayo xa uthengisa urhwebo, ubuncinci kuba uya kujonga ukutsiba kumaxabiso amancinci kakhulu. Kananjalo, kubalulekile ukuba ukhululeke kwitshathi yemizuzu eyi-1 ngaphambi kokubeka isicwangciso sakho sokuqhelisela.
Icebiso lesi-2: I-Niche-Down ukuya kwiPair ethile yemali
Ukurhweba nge-Scalping akunjalo nje malunga neetshathi. Ngokuchasene noko, imalunga nokuqonda ngokuqinileyo ukuba yintoni eyenza ukuba isibini esithile semali 'siphawule'. Umzekelo, ngaba isibini semali sifumana intshukumo eguqukayo ngakumbi ngexesha leenxalenye ezithile zosuku? Okanye, ngaba ukuhlawula amatyala kunqabile kwiintsuku ezithile? Nokuba yeyiphi na indlela, ezi ziimetriki eziphambili wena njengomrhwebi otyhafayo ekufuneka uyazi.
Kananjalo, kufanelekile ukuba uqwalasele i-niching-down ukuya kwiibini ezimbalwa ze-forex. Ngokwenza njalo, uya kuba nolwazi oluphambili kwinani elincinci lezibini ezikhethiweyo, kwaye ke-zinike elona thuba libalaseleyo lokwenza urhwebo olunempumelelo ngakumbi kunokulahlekelwa ngumsebenzi.
Icebiso lesi-3: Khetha iNzuzo yakho kunye neParameter yomngcipheko
Ngaphambi kokuba ucinge ngokubeka urhwebo lwakho lokuqala lokukhwela, kubalulekile ukuba ucinge malunga neparameter zokurhweba. Okokuqala, kufuneka ucinge malunga nokuba uza kwenza inzuzo engakanani kurhwebo ngalunye. Eli nani kufuneka lihlale lihlala lihleli maxa onke ukuze kuqinisekiswe ukuba ukukrwaqula kwakho kube yinkqubo yenkqubo engenangqondo.
Umzekelo, ukuba uthatha isigqibo sokujolisa kwi-0.2% kwinzuzo kwisithuba ngasinye, yile nto iodolo yakho yokuthatha inzuzo kufuneka ihlale kuyo. Ngokufanayo, kuya kufuneka ucinge ngeyona nto uzimisele ngayo ukuphulukana norhwebo ngalunye. Ngokufana ne-odolo yakho yokuthatha inzuzo, ii-odolo zakho zokuyeka ilahleko kufuneka zihlale zihlala zihleli.
Icebiso 4: Ufuna uMgangatho oPhezulu wokuPhumelela ukuze Uphumelele
Abathengisi bendabuko be-swing bahlala befumana umyinge wokuphumelela ongaphantsi kwe-50% kwaye basenza inzuzo yexesha elide. Umzekelo, umtyali mali unokulahla iipesenti ezintlanu kwimisebenzi emithathu engaphumelelanga, kodwa emva koko enze iipesenti ezingama-5 kurhwebo abalugcinileyo luvulekile kangangeenyanga. Nangona kunjalo, obu bunewunewu abufumaneki kubarhwebi abashushu.
Ngokuchasene noko, kufuneka ubenenqanaba eliphezulu lokuphumelela ukwenza i-scalping iphumelele. Umzekelo, masithi usete i-odolo yakho yokuthatha inzuzo kwi-0.6%, kunye neeodolo zakho zelahleko yokumisa kwi-0.4%. Oku kuthetha ukuba kufuneka ube nomyinge wokuphumelela ubuncinci wama-66% ukuze uzuze ixesha elide, elixabisa ukuthengisa okuphumeleleyo oku-2 kwaba-3.
Icebiso lesi-5: Awunyanzelekanga ukuba usebenzise amandla ukuze uphumelele
Kuhlala kukho ukungaqondi okuvela kubatyali mali be-newbie abathi ukurhweba urhwebo kufanelekile ukuba ukwenze xa usebenzisa ubungakanani kurhwebo lwakho. Ngelixa ukuphakama kunokwandisa inzuzo yakho encinci, inokwenza okufanayo kwilahleko yakho. Ngale nto ithethwayo, umbono ogqwesileyo wokukrola kukuba ufuna ukwenza iinzuzo ezincinci kumakhulu ezorhwebo, ngenxa yoko ukunyanzelisa akuyomfuneko ukuba unenqanaba eliphezulu lokuphumelela.
Umzekelo, masithi uthengisa nge-akhawunti eseleyo ye- $ 2,000. Ukuba inqanaba lakho lokuthatha inzuzo lisetelwe kwi-0.2%, oku kuthetha ukuba uyakwenza i- $ 2 ngorhwebo olunempumelelo. Nangona kunjalo, ukuba ubukwazi ukubeka urhwebo nge-100 ngemini- kwaye iipesenti ezingama-75 zazo ziphumelele, uya kuba wenza ingeniso efanelekileyo-ngelixa kwangaxeshanye usakha i-bankroll yakho yorhwebo ngendlela ecwangcisiweyo.
Ndilikhetha njani i-Forex Broker yokuThengisa ngeScalping?
Ke ngoku ukuba uyazi i-ins kunye nokuphuma kwento ethengisa ukurhweba kunye nendlela esebenza ngayo le nkqubo, ngoku kufuneka uqale ngokucinga ngokukhetha umrhwebi. Ukuze ufumane oyena broker ungcono kwiimfuno zakho zorhwebo, kuya kufuneka wenze uluhlu lwezinto zokujonga ukuze uqiniseke ukuba iqonga lilungele ukucheba.
Oku kufuneka kubandakanya:
Okokuqala nokuphambili, kufuneka uvavanye iintlobo zokusasazeka ezihlawuliswa ngumrhwebi. Kulabo abangaziyo, lo ngumahluko phakathi 'kokuthenga' kunye 'nokuthengisa' ixabiso lesibini se-forex. Umzekelo, masithi ixabiso lokuthenga kwi-GBP / USD 'yi-1.3117', kwaye ixabiso lokuthengisa 'yi-1.3120'.
Ngumahluko phakathi kwamaxabiso amabini abekwe kwii-3pips, oku kuthetha ukuba kuya kufuneka wenze ubuncinci iipipsi ezi-3 ukuze uphule. Enkulu le sasazaOkukhona kufuneka uyenze ukuze ufumane urhwebo lwakho eluhlaza, ke kubalulekile ukuba uhambe nomrhwebi onikezela ukusasazeka okuqinileyo.
Oku akunakuba kubaluleke ngakumbi kwimeko yokukhwela, njengoko uzakube ujonge ukwenza inzuzo encinci kakhulu. Ukusasazeka okuhlawuliswe ngabarhwebi kunokuhluka kakhulu kuxhomekeke kudidi lwee forex othengisayo. Umzekelo, ii-majors ziya kuhlala zisiza kunye nokusasazeka okuqinileyo-njengoko ubuninzi kunye nenqanaba lokungazinzi liphantsi, kwaye amanani ezorhwebo aphezulu.
Issions IiKomishini zoRhwebo
Ngaphezulu kokusasazeka, kuya kufuneka wenze ezinye izinto ngokubhekisele kwiikomishini zorhwebo. Kwakhona, oku kuya kuba nefuthe ngokuthe ngqo kumandla akho okwenza iinzuzo ezincinci kwimini yonke, ke kuya kufuneka uphonononge ubume bemirhumo engaphantsi eqeshwe ngumrhwebi. Oku kuhlala kuhlawulwa njengepesenti yorhwebo ubungakanani, kwaye ihlawuliswa kuzo zombini iziphelo zorhwebo.
Umzekelo, masithi ubeka urhwebo olunexabiso le- $ 2,000, kwaye umrhwebi ubiza i-0.1% kwikhomishini. Oku kuthetha ukuba kuyakufuneka uhlawule i- $ 2 ukubeka urhwebo. Ukuba uthengisa iodolo xa ixabisa i- $ 2,200, uya kuhlawula umrhumo we- $ 2.20. Ekugqibeleni, kuya kufuneka uhambe nomrhwebi ohlawulisa iikhomishini zorhwebo eziphantsi.
Qaphela: Nangona inani labarhwebi elisebenza kwindawo ye-intanethi ye-intanethi linikezela ukurhweba ngaphandle kwekhomishini, kuya kufuneka unyathele ngononophelo. Kungenxa yokuba umthengisi engenakho ukuhlawulisa nayiphi na ikhomishini ngentetho nganye, kodwa baya kuhlawulisa ukusasazeka okuphezulu ngokwenene.
🥇 Ukwenza uMyalelo
Ngelixa ukusasazeka okuqinileyo kunye neekhomishini eziphantsi zibalulekile ngokulinganayo ekufuneka ujonge kuzo xa ukhetha umrhwebi ongaphambili we-scalping- njengenkqubo yokuphumeza iodolo. Eli lixesha elithathwa ngumrhwebi we-forex ukwenza iodolo yakho ukusukela ngexesha ebekwe ngalo.
Kuya kufuneka ukhethe umthengisi onamandla okwenza i-scalping order yakho kwimizuzwana emincinci- njengoko oku kuya kuqinisekisa ukuba ufumana iodolo yakho ngexabiso elifunekayo. Abarhwebi bahlala bepapasha olu lwazi kwiwebhusayithi yabo, ecaleni kwenkqubo esetyenziswayo xa kuthelekiswa abathengi kunye nabathengisi.
Izixhobo zokuChart Advanced
Ukurhweba nge-Scalping kufuna uphando olukumgangatho ophezulu kunye nohlalutyo ukuze luphumelele. Emva kwayo yonke loo nto, ujonge ukuqikelela ukuba zeziphi iindlela eziza kuhamba ngazo iimarike malunga nomzuzu ngomzuzu. Ekuphela kwendlela yokwenza oku ngempumelelo kukuba ube nokuqonda okuqinisekileyo malunga nendlela ezisebenza ngayo izixhobo zokutshata kunye nezalathi zobuchwephesha.
Ngaphandle kwabo, awuyi kuba nezixhobo ezifanelekileyo zokufumanisa ukuba zeziphi iindlela eziza kuhamba ngazo iimarike. Kananjalo, kuya kufuneka usebenzise umthengisi we-forex onikezela ngeempawu ezininzi ezaziwayo. Oku kuya kubandakanya ukuthandwa kweeMilinganiselo eziHlangeneyo zokuHamba, iiBollinger Bands, i-Index ye-Relative Strength Index, kunye neFibonacci Retracement Levels.
Kuya kufuneka uphinde uvavanye ukuma kolawulo lomthengisi wakho we forex okhethiweyo. Ubuncinci ubuncinci, umrhwebi kufuneka abambe ilayisensi kumzimba ohlonishwayo wezezimali. Umzekelo, ukuba uhlala e-UK. umthengisi kufuneka agunyaziswe kwaye alawulwe liGunya lokuZiphatha kwezeziMali (i-FCA).
Ngaphezulu kwelayisensi yokwenyani, kuya kufuneka uchithe ixesha elithile ujonga igama lomthengisi. Unokwenza oku ngokufunda ngophononongo lwe-Intanethi olufumanekayo kwindawo kawonkewonke.
Umthengisi ogqibeleleyo we-Forex weScalping 2021
Ngokulandela ezi zikhokelo zingasentla malunga nendlela yokukhetha i-forex broker ye-scalping, uya kuba nezixhobo ezifunekayo zokufumana iqonga elihlangabezana ngokufanelekileyo neemfuno zakho. Nangona kunjalo, ukuba awunalo ixesha lokwenza umsebenzi wakho ngenxa yokukhuthala kwakho, sidwelise ezona zikhetho zethu zibalaseleyo zokurhweba ngezantsi.
Ukuba usifundile isikhokelo ukusuka ekuqaleni ukuya ekugqibeleni, kuya kufuneka ngoku ube nokuqonda okuqinisekileyo malunga nokuba yintoni urhwebo olushushu kunye nendlela esebenza ngayo le nkqubo. Siphule iziseko zento ekufuneka uyenzile ukuze ufumane umsebenzi wakho wokurhweba unyawo lwasekunene. Oku kubandakanya ukukwazi ukufunda iitshathi zemizuzu eli-1, kunye nesidingo sokusetha ukulahleka kokumisa okuqinisekileyo kunye nokungaguquguquki. Ngokwenza njalo, uya kuma elona thuba lifanelekileyo lokunciphisa umngcipheko wakho.
Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba kuya kufuneka ubenenqanaba eliphezulu lokuphumelela ukuze uphumelele kurhwebo lwe-scalping. Kungenxa yokuba iingeniso zakho ziya kusekelwa kwiipesenti ezincinci kakhulu, ke kuya kufuneka ukuba uzenze ezininzi ukuze wenze isikali sokuxabisa. Sikunike ulwahlulo olupheleleyo lwezinto ekufuneka ujonge kuzo xa ukhetha umrhwebi we-forex ukulungiselela ukuthengisa kwakho. Ngaphezulu kokusasazeka okuphantsi kunye neekhomishini zorhwebo, kuya kufuneka ukhethe umthengisi onerekhodi egqwesileyo yokulandela imiyalelo kwii-microseconds.
Yintoni ukurhweba nge-scalping?
I-Scalping sisicwangciso-qhinga sokurhweba esibona umtyali mali 'scalp' inzuzo encinci-encinci. Ezi zibonelelo zihlala ziba ziipips ezimbalwa ngesikhundla ngasinye, nangona kunjalo, i-scalpers ibeka ngaphezulu kwe-100 yokuthengisa ngosuku. Kananjalo, kuyathenjwa ukuba ezi nzuzo zincinci ziya kutshintshela kwiimfumba zorhwebo olunenzuzo imini yonke.
Ngaba ndifuna ukuseta ii-odolo zokulahleka xa uyekisa ukuthengisa?
Ukusetyenziswa kwee-odolo zokulahleka kokuyeka yeyona nto ifunekayo xa uthengisa urhwebo. Kungenxa yokuba isicwangciso-qhinga sifuna ukurhweba ngendlela esemngciphekweni kakhulu, kwaye ilahleko igcinwe isezantsi. Oku kubalulekile, njengoko urhwebo lwe-scalping lufuna umvuzo ophumelele kakhulu ngokuthelekisa ukurhweba ngokurhweba.
Nguwuphi umahluko phakathi kokurhweba nge-scalping kunye ne-swing?
Ukurhweba ngokurhweba kungabona umtyali mali egcina indawo evulekile kwinani leentsuku, iiveki, okanye iinyanga. Ngokuchasene noko, abathengisi be-swing abanakufane bagcine indawo ivulekile ngaphezulu kwemizuzu embalwa.
Yimalini ekufuneka ndijolise kuyo xa ndizuza urhwebo?
Akukho bungakanani-bento-yonke impendulo kumbuzo wakhe, kuba akukho babini abathengisi bayalingana. Eyona nto ibalulekileyo ekufuneka uyijongile bubungakanani be-odolo yakho yokwenza inzuzo ngokunxulumene nee-odolo zakho zokulahleka. Kufuneka ufumane ibhalansi ngokufanelekileyo ukuze ukhusele i-bankroll yakho.
Leliphi elona klasi lixabisekileyo lokurhweba ngesikali?
I-Forex ihlala ikulungele ukurhweba nge-scalping- ngakumbi ubukhulu. Kungenxa yokuba izibini ezinkulu zemali zixhamla kulwelo oluphezulu, ukungazinzi okuncinci, kwaye iimarike zisebenza nge-24/7.
Ngaba kufuneka ndifake isicelo xa kuthengiswa urhwebo?
Awunyanzelekanga ukuba usebenzise ubungakanani ukuze wenze isikali esifanelekileyo. Nangona uyakube ujolise ekuzuzeni okuphezulu kuphela, kuyathenjwa ukuba uyakwazi ukubeka uninzi lwezorhwebo olunempumelelo ngosuku.
Ndifanele ndiqale kangakanani xa uthengisa urhwebo?
Ukuba awunamava okuthengisa urhwebo nge-scalping, singacebisa ukuba ugcine izibonda zakho kwizixa ezincinci. Uya kuzenza iimpazamo xa uqala ukuqala, ke kungcono ukuba ungazibeki emngciphekweni kakhulu de ube wonwabe ngakumbi nge-scalping.